ပန်ဒိုရာ: 8 Nov 2007
Happy Birthday for Yours ! :)
ဟယ် အသဲပုံလေးက လှလိုက်တာ ။ အားကျတယ်း)
November 8, 2007 at 4:33 AM
အလှတရားဆိုတာ ရှိတယ်။ ဘ၀မှာလည်း ရှိတယ်။ အနုပညာမှာလည်း ရှိတယ်။ ပန်ဒိုရာမှာလည်း ရှိတယ်။ မွေးနေ့ပါတီလေး လှပပါစေ။
ဟယ်.. မပန် ကဗျာလေးရော.. အသည်းပုံလေးရော...
very romantic!!! အဟိ.. :P
ကဗျာလေးရော ပုံလေးပါ သဘောကျတယ် :)
Happy Birthday ပါ.. အရီးပန်ကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အရီးပန် ရဲ့ ဟို..ဟို...ဟို ဒင်း။။။
ကဗျာဆန်တဲ့ ...အတွေးအခေါ်ကောင်းတဲ့ အရီးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ရတာ .“......” ကံကောင်းတယ်လို့မှတ်ယူပါရှင်...။ သနပ်ခါးပန်းရဲ့ ရနံ့ကို တန်ဖိုးထားခံစားရင်း ဘ၀တလျှောက်လုံး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ လို့ အလေးအနက် ဆုတောင်းခဲ့ ပါတယ်ရှင်...။
မွေး နေ့ရှင် "သူ့ " ကို ပြ ပြီး ပြီ လား . . ???
မပန်..ချစ်သူဆိုတာ အနော့်ကိုပြောတာလား... ဒီလောက်ကြီးလည်းမလိုပါဘူးအစ်မရယ်.. တူများတွေ တညိုးထင်ကုန်မှာပေါ့.. :P
အဟိ .. နုလိုက်တာ
လှပ ။ ပိုင်ဆိုင်သူ ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတောင် သဲပုံထဲ ထည့်ရေးသင့် ၊ ထင်မိ ။
မပန်နဲ့ မပန်ကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတို့ ပျော်ရွှင်ပါစေခင်ဗျာ :)
မပန်နဲ့ မပန်ရဲ့ချစ်သူတို့ ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့များစွာ ဆင်နွှဲနိုင်ကြပါစေ။
ဒီမှာတော့ ဂ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂ပဲ ရှိသေးတယ်နော်။
ပန်ဒိုရာပိုင်ရှင် ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ ပန်ဒိုရာကို လည်း တိုးဝှေ့ခွင့်ပေးနိုင်ပါစေ။ ;)
Nice post with nice expression of words!
Happy birthday for yours and Wish you enjoy together naw.
ကဗျာလေးနဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ အရမ်းလှတယ်။ စာသားကော ... မပန် အမြဲပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ
ပါရမီဖြည့်ဘက်တွေ ဖြစ်ကြပါစေဗျာ ...။
Happy Belated Birthday to Yours. မပန်ရေ ဆောရီးပါ၊ နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်၊ မပန်ရော မပန်ကို ပိုင်ဆိုင်သူပါ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်၊
ဟေမာရေ သူက ပန်ဒိုရာထက် ၄ နှစ်ကြီးပါတယ်။
ံHaveabetter world with yours!